Madaxweynaha La Liga oo hoos u dhigay khasaaraha lacageed ay sheeganeyso Real Madrid isagoo sheegay inay soo iibsan karaan Mbappe iyo Haaland - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
Madaxweynaha La Liga oo hoos u dhigay khasaaraha lacageed ay sheeganeyso Real Madrid isagoo sheegay inay soo iibsan karaan Mbappe iyo Haaland
September 14, 2021 at 10:13 Madaxweynaha La Liga oo hoos u dhigay khasaaraha lacageed ay sheeganeyso Real Madrid isagoo sheegay inay soo iibsan karaan Mbappe iyo Haaland2021-09-14T10:13:33+02:00 CAYAARAHA
(Madrid) 14 Sebt 2021. Madaxweynaha horyaalka La Liga ee Javier Tebas ayaa sheegay inay Real Madrid leedahay awood dhaqaale oo ay mar kula soo saxiixan karto xagaaga dambe xiddigaha ay aadka u dooneyso ee kala ah Kylian Mbbape oo ka tirsan naadiga Paris Saint-Germain ee Erling Haaland oo u ciyaara kooxda Borussia Dortmund.
Kooxda reer Spain ayaa suuqii xagaaga ee dhowaan xirmay labo dalab ka gudbisay Mbappe iyadoo dalabkii dambe uu gaarayay qiimo dhan 180 milyan oo euro hase ahaatee, PSG ayaa iska soo diidday labadaas yabooh, xagaag dambe se bilaash ayaa lagu heli karaa laacibka reer France.
Sidoo kale, Madrid waxaa bartilmaameed u ah Haaland oo ka tirsan Dortmund, hase ahaatee, isaguna kooxdiisa ayaa diidday xagaagan inay iibiso inkastoo qiimo hoose lagu heli karo sanadka dambe.
Si kastaba ha ahaatee, madaxweynaha horyaalka La Liga ee Tebas ayaa sheegay inay Los Blancos sameyn karto labadaas saxiix sidoo kalena ay macaash badan ka heshay xiddigaha laga iibsaday taasoo ka dhigan inaysan heysan dhibaato miisaaniyadeed oo dhanka saxiixa iyo mushaharaadkaba ah.
Bishii July ee sanadkan, Real Madrid ayaa sheegtay inay la kulantay khasaare lacageed oo gaaraya 300 milyan oo euro kaasoo uu sababay Korona Fayras sida ay kooxdu sheegta, hase ahaatee, Tebas ayaa sheegay inay iibinta xiddigaha ka heshay lacag xoog leh sidoo kale ay haatan sameyn karto saxiixyada labada xiddig ee loo saadaalinayo inay maamulaan masxara ugu sarreeya kubadda cagta marka ay ka dagan Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi.
“Waxay ay iibiyeen ciyaartoy ay ka macaasheen 200 milyan oo euro, haatan waxaa bangiga u yaalla miisaaniyad ay kula soo saxiixan karaan Mbappe iyo Haaland oo wada jira” ayuu madaxweynaha horyaalka Spain u sheegay majaladda Football Espana.
Si kastaba ha ahaatee, Tepas ayaa sidoo kale weeraray kooxda PSG isagoo ku tilmaamay inay qatar u yihiin sida Super League oo kale kubadda cagtana ay ku halakeyneyso dhaqaale fara badan.
« Guddiga doorashooyinka oo dalab xasaasi ah u gudbiyey R/Wasaare Rooble + Sawirro
Chelsea oo diyaar u ah inay heshiiska u kordhiso Mason Mount iyadoo u labo-jibbaareysa mushaharkiisa… (Immisa ayuu haatan qaataa?) »